Izimali Zokuhlala Nezikhungo Zokuhlala - Isikole Esiyinhloko Esilimini, eCambridge
Izinkokhelo ze-Course and Accommodation
Ukunikezwa okukhethekile - ama-20% akhokhisa imali yokufunda kaSepthemba-Disemba 2020
Imali ekhokhwayo yokufunda engama-2020 ephelele (donsela ama-20% kokunikezwa okungenhla):
IsiNgisi esinamandla GBP 260 ngesonto I-21 yamahora wokufundela ngeviki kanye neminye imisebenzi yomphakathi / yamasiko. Kuhlanganisa ukulungiselela ukuhlolwa.
IsiNgisi Jikelele GBP 205 ngesonto I-15 yamahora wokufundela ngeviki kanye nemisebenzi yomphakathi / yamasiko 4-5 emini.
Ngenkathi yesonto ntambama GBP 80 ngesonto Amahora angu-6 efundiswa ngeviki ngoLwesibili, ngoLwesithathu nangoLwesine ntambama. Kuhlanganisa ukulungiselela ukuhlolwa.
Izaphulelo ezingeziwe ziyatholakala ukuze zifakwe isikhathi eside kuma-Intensive, General & Af Cour Courses:
Amaviki angu-4-9 5% isaphulelo
Amaviki angu-10-15 10% isaphulelo
Amaviki angu-16-23 15% isaphulelo
Amaviki angu-24 noma ngaphezulu kwe-20% isaphulelo
Izifundo eziyodwa kuya kweyodwa: GBP 55 nge-awa-izaphulelo zixoxisana
Imali yakho yenkambo ihlanganisa:
Izinto zokwakha zesikole
Ukufinyelela ezinsizeni zokuzifunda
I-Free wif-fi eSikoleni
Isitifiketi kanye nokubika ngezifundo zesikhathi esigcwele
Ukulungiselela ukuhlolwa uma kudingeka
Imisebenzi eminingi yezenhlalakahle namasiko
Izimali zakho zezinkambo azibandakanyi:
Izincwadi zezinhlamvu zolimi nezincwadi zokuhlola
Umshwalense womuntu siqu nokuhamba
Ukuhamba uye eSikoleni ngebhasi noma ngebhayisikili
2020 amanani entengo yokuhlala:
Indawo yokuqashwa kweBhodi yeHhafu GBP 170 ngesonto
Indawo yokulala yase-Bed and Breakfast GBP 140 ngesonto
Indawo yokuqasha ekhaya GBP 130 ngesonto
Ayikho imali yokubhuka yokuhlala ekhokhwa ngoSepthemba-Disemba 2020.
Izimali zokungena azifakiwe kwizindleko zemfundo. Kumele uhlole izivivinyo zeCambridge mayelana nezinyanga ze-2 ngaphambi kosuku lokuhlolwa.
Izinsuku zokuhlolwa kanye nemali ye-2020
Izinsuku Zokuhlolwa Izintela Zokungena
I-PET Izikhathi ze-6 ngonyaka GBP 95
I-FCE Izikhathi ze-6 ngonyaka GBP 151
I-CAE Izikhathi ze-9 ngonyaka GBP 157
I-CPE Izikhathi ze-4 ngonyaka GBP 164
IELTS Ngokuvamile GBP 185
Ukuze uthole olunye ulwazi sicela uvakashele www.cambridgeopencentre.org futhi https://ielts.britishcouncil.org/ihlondon
Ukuhambela kweviki nokuhamba
Izindleko: phakathi kwe-£ 22 ne-£ 47 yokuvakasha kwelanga elilodwa. Sicela uxhumane neSikole samanani wezimpelasonto zokuvakasha.
Sikukwazisa ukuba uhlele umshwalense ukukhokhela ukwelashwa, ukulahlekelwa kwempahla yakho nokulahlekelwa kwemali, uma kufanele ukhansele inkambo yakho. Uma uvela e-European Union, sikukwazisa ukuba ulethe imibhalo efanele ukuze uthole ukwelashwa mahhala.
Ngemuva kokuba ukhokhele imali yokukhokhela izindleko zezingane zakho zesikolo sakho kanye nesigamu, ungase udingeke ukhokhe izinsuku zokudla ngeviki, ukuvakasha okukhethwa kukho, ezinye izinto zokuzikhethela ntambama, ukuhamba uye esikhumulweni sezindiza, ibhasi noma ukuhamba ngebhayisikili eCambridge. Ungasebenzisa izincwadi zesikole phakathi nenkambo, kodwa singancoma ukuthi futhi uthenge incwadi yereferensi yocingo uma ulapha. Sizokukwazisa ukuba ulethe okungenani £ 50 ngesonto.
Uma ubhalisela isonto uma kuneHholide likaHulumeni uzothola isaphulelo seviki. Azikho amakilasi ezinsukwini ezilandelayo ku-2020:
Isikole sivalela amaholide kaKhisimusi ngemuva kwe-20 ngo-December 2019 kanti amakilasi azoqala ngoLwesibili ngoLwesibili 7 Januwari 2020.
ULwesihlanu 10 April - Good Friday
UMsombuluko 13 April - NgoMsombuluko wePhasika
NgoLwesihlanu i-8 Meyi - uSuku lweMi
NgoMsombuluko 25 May - Iholide leBhange leSpanishi
NgoMsombuluko 31 Agasti - Iholide leBhanki lasehlobo
Isikole sivala amaholide kaKhisimusi kusukela ngo-18 December 2020 kuya ku-5 January 2021.
Uma unquma ukuthatha iholidi phakathi nenkambo yakho, sicela usitshele kusengaphambili. Uma ukhona eholidini ngesonto ngoMsombuluko-ngoLwesihlanu, ngeke sikhokhele imali yokufundela lelo sonto. Uma ungasekho ekhaya lakho, kungenzeka ukhokhe imali egcwele noma ingxenye ukuze ugcine igumbi lakho.